It will be a first for Zimbabwe's voters: The name of Robert Mugabe won't be on the ballot when elections are held on July 30. But the military-backed system that kept the former leader in power for decades, and then pushed him out, is still in control.
Nelson Chamisa, who is leading the coalition of most opposition parties in Zimbabwe, addresses members of the Movement for Democratic Change in Masvingo, June 9, 2018, about 300 km south of Harare.
President Emmerson Mnangagwa addresses members of ruling Zanu PF in Mutoko, June 9, 2018, about 150 km east of Harare.
FILE - Human rights lawyer, former Zimbabwe finance minister Tendai Biti, addressing journalists outside court. (Sebastian Mhofu/VOA)